नर्भिक अस्पतालकाे मनोमानी, कोरोना पजेटिव विरामीको यस्तो छ उपचार! दिनकै ६८ हजार (बिलसहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > नर्भिक अस्पतालकाे मनोमानी, कोरोना पजेटिव विरामीको यस्तो छ उपचार! दिनकै ६८ हजार (बिलसहित)
नर्भिक अस्पतालकाे मनोमानी, कोरोना पजेटिव विरामीको यस्तो छ उपचार! दिनकै ६८ हजार (बिलसहित)
admin September 3, 2020 September 3, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
मौकामा चौका हान्न दाउ हेरेर बसेका निजी अस्पतालहरुले जीवन मरणको दोसाँदमा परेका बिरामीबाट भेटेका शीर्षक जति खोजेर अशुल्न किन छाड्थे र ?
काठमाडौं । वीरगन्जका ४५ वर्षीय एक जना पुरुष दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो । केही दिनदेखि सामान्य ज्वरो आएको थियो । सास फेर्न गाह्रो भएपछि परिवारले गण्डकस्थित बौद्ध अस्पताल लगे । त्यहाँ कोरोनासँग मिल्दाजुल्दो लक्षण देखिएको भन्दै पीसीआर रिपोर्ट नभएसम्म त्यहाँ भर्ना नलिने भन्यो । सो अस्पतालले भर्ना लिन पीसीआर रिपोर्ट चाहिन्छ भनेपछि परीक्षण गरियो र रिपोर्ट नेगेटिभ आयो।
रिपोर्ट नगेटिभ रहेपछि बौद्ध अस्पतालले भर्ना लियो । तर भर्ना भइसक्दासम्म बिरामीको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि भोलिपल्टै एम्बुलेन्समा अक्सिजन दिँदै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल ल्याइयो । नर्भिकले पुनःपीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो।
वीरगञ्जमै स्थानीय अस्पतालबाट पीडित भई नर्भिक आएका बिरामीका आफन्तले यहाँ सेवा त पाए तर चर्काे मूल्यमा । भदौ ४ गते भर्ना भएकै दिन बेड चार्ज ९ हजार ५ सय लिएको नर्भिकले कोरोना पुष्टि भएपछि बिरामीलाई अस्पतालले कोभिड क्रिटिकल वार्डमा सार्‍यो । त्यसपछिका दिनमा कोभिड बिरामी भन्दै सामान्य बिरामीलाई लिनेभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिएको बिरामीका परिवारले दुखेसो गरेका छन् ।
‘कोभिड वार्डमा सारेपछि हामीलाई प्रतिदिन १० हजार बेड चार्ज, १० हजार कोभिड सुरक्षा चार्ज, १ हजार खाना चार्ज र १ हजार नर्सिङ चार्ज भन्दै २२ हजारको बिल आउन थाल्यो’ बिरामीका छोराले भन्नुभयो, ‘हामीलाई त बुवालाई जसरी पनि बचाउनु थियो, भने अनुसार सबै परीक्षण गर्‍यौँ, डिस्चार्ज हुने बेला केही छुट हुन्छ होला भन्ने सोचेका थियाैँ तर उल्टै सर्भिस चार्ज भनेर थप १० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु पर्‍यो, भर्ना भएको ७ दिनमा भदौ १० गते डिस्चार्ज हुँदा फार्मेसी सहित अस्पताललाई ४ लाख ७८ हजार ४७६ रुपैयाँ तिर्‍याैँ ।’
नर्भिक आफैले केहीदिन अघि १४ दिन कोरोना बिरामीलाई आइसोलेट गरेको १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्मको अफर गर्दै विज्ञापन गरेको थियो ।
कोरानाको बिरामी भनेपछि हरेक इन्भेष्टिगेसनको शुल्क अरुलाई भन्द ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिइएको उहाँको भनाइ छ । अरु बिरामीलाई ९ हजार ५ सयमा हुने सिटिस्क्यान कोरोनाका बिरामीभएर आफुहरुले १४ हजार तिर्नपरेको उहाँले बताउनुभयो । बिरामीका छोराका अनुसार बिरामीका सास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पतालले २४ घण्टा अक्सिजन दिई उपचार गरेको थियो।
नर्भिकले कोभिड क्रिटिकल वार्ड भन्ने नाम दिइएको उपचार कक्षमा राखेको बिरामीका छोराले जानकारी दिनुभयो। बिरामीका छोरा स्वयं पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ७ दिन त्यहाँ राख्दा एक दिन अक्सिजन दिइएको थियो । बाँकी ५ दिनमा केही इन्जेक्सन र केही औषधि दिइएको थियो।
७ दिनसम्म ७ डोज रेम्डिसिभिर औषधि चलाइएको थियो । गरिएको उपचार हेर्दा त्यति धेरै खर्च नलाग्नु पर्ने बिरामीका छोरा बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अधिकारीहरुका अनुसार एक डोज रेम्डिसिभिरको ७ हजार भन्दा बढी शुल्क लिन पाइदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना बिरामी उपचार गरेबापत्को शुल्कका सम्बन्धमा बनाएको निर्देशिकामा लक्षण नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेको १ दिनको २००० (खानासहित) सम्म लिन पाउने भनिएको छ।
सामान्य लक्षण देखिएकालाई ३५ सय, आइसीयूमै राख्नु पर्ने भएमा ७ हजार र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीसँग सबै चार्जसहित १५ हजारसम्म लिन पाइन्छ । मन्त्रालयको यो नियम कागजमै मात्र सीमित भएको छ।
वीरगन्जका उहाँ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ । आइसीयू, भेन्टिलेटर त परको कुरा सरकारले व्यवस्था गरेको अस्पतालको आइसोलेसनमा पनि संक्रमित बस्न पाउने अवस्था छैन । पैसा र पहुँच नभएका संक्रमितहरुमा जटिल लक्षण देखिएको खण्डमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने वा निजी अस्पतालहरुमा गएर निरीह बन्दै लुटिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ।
मौकामा चौका हान्न दाउ हेरेर बसेका निजी अस्पतालहरुले जीवन मरणको दोसाँदमा परेका बिरामीबाट भेटेका शीर्षक जति खोजेर अशुल्न किन छाड्थे र ? नियमन र कारबाही गर्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यस्ता घटनाबाट जानकार नभएको होइन । मन्त्रालयले बढी शुल्क लिन पाइदैन सधैँ भनिरहन्छ तर कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। यसअघि पनि नर्भिकले सेवाग्राहीलाई ठगेको पाइएपछि वाणिजय विभागले कारबाही गर्न खोज्दा त्यहाँको अधिकारीको नै सरुवा भएको थियो ।
जगन्नाथ ढकाल/हेल्थपाटीबाट साभारित सामाग्री ।
दुःखद कार दुर्घटनामा ५ युवककाे ज्यान गयो
बिदेश जादै हुनुहुन्छ या छुट्टि आउदै हुनुहुन्छ? श्रम स्विकृतिका लागि यस्तो अवस्य बनाउनुस्!
भर्खरै नुवाकोटबाट आयो सबै नेपालीलाई रुवाउने खबर, स्थानियका अनुसार ३० जना को मृत्यु – लास यसरी छरिए
८ बर्षिय छोरीको बिजोग,२ बर्ष देखि श्रीमतीले सास फेर्न छोडिन, श्रीमानले रुँदै भने मेरै काल अगाडी आयोस…(हेर्नुहोस् भिडियो)
कोरिया र दुबई त्यागेर तिन युवा मिलि पोखरामा थालेको व्यवसाय सरकारले चौपट बनायो, सरकारले रोजगार दिनु त कहा हो कहा आफैले गर्नेको पनि पेटमा यस्तो लात (पुरा भिडियो)